AHOANA NY FANESORANA WINDOWS 10 AMIN'NY SOLOSAINA FINDAY - WINDOWS - 2019
Esory ny Windows 10 amin'ny solosaina finday
Ny olana mahazatra indrindra izay mitranga rehefa manomboka programa na lalao dia fahasimbana ao amin'ny trano famakiam-boky miavaka. Anisan'izany ny mfc71.dll. DLL iray amin'ny rakitra DLL izay an'ny Microsoft Visual Studio, indrindra ny rakitra .NET, noho izany dia azo ampiasaina ao amin'ny Microsoft Visual Studio ny programa raha toa ka diso ilay rakitra voafaritra na tsy simba. Ny fahadisoana dia miseho indrindra amin'ny Windows 7 sy 8.
Ahoana ny fomba hanesorana ny diso mfc71.dll
Ny mpampiasa dia manana safidy maromaro hamahana ny olana. Ny voalohany dia ny mametraka (manavao) ny tontolo manodidina ny Microsoft Visual Studio: ny ampahany iray ao amin'ny .NET dia havaozina na ampifandraisina miaraka amin'ny programa, izay hamaha azy tanteraka. Ny safidy faharoa dia ny maka ny tranomboky ilaina amin'ny tanana na mampiasa rindrambaiko natao ho an'ny dingana toy izany ary hametraka azy ao amin'ny rafitra.
Fomba 1: DLL Suite
Ity programa ity dia tena manampy amin'ny famahana olana maro samihafa. Eo ambanin'ny fahefany hamahana ny olantsika amin'izao fotoana izao.
Raiso ny rindrambaiko. Hijery ny ankavia, ao amin'ny sakafo maina. Misy zavatra iray "Load DLL". Tsindrio eo.
Hanokatra varavarankely iray hisokatra. Amin'ny sehatra mifanaraka amin'izany, midira "Mfc71.dll"ary tsindrio avy eo "Diniho".
Avereno jerena ny valiny ary tsindrio ny anaran'ny mety.
Raha te-haka sy hampidirina ny tranomboky, dia tsindrio "Startup".
Aorian'ny faran'ny fepetra dia tsy hitranga indray ny hadisoana.
Fomba 2: Mametraka Microsoft Visual Studio
Safidy somary vitan-dresaka ny fametrahana ny version farany amin'ny Microsoft Visual Studio. Na dia izany aza, ho an'ny mpampiasa tsy azo antoka, ity no fomba tsotra sy azo antoka indrindra hiatrehana olana.
Voalohany indrindra, mila maka ilay installer amin'ny tranonkala ofisialy ianao (mila miditra ao amin'ny kaontinao Microsoft ianao na mamorona iray hafa).
Afaho ny tranokala ofisialin'ny Microsoft Visual Studio amin'ny tranonkala ofisialy.
Ny dikan-teny rehetra dia mety, fa mba hisorohana ny olana, dia manoray ny fampiasana ny safidin'ny Visual Studio Community. Ny bokotra Download ho an'ity andian-dahatsoratra ity dia voamarika ao amin'ny pikantsary.
Sokafy ny installer. Tokony hanaiky ilay fifanekena momba ny fahana ianao alohan'ny hanohizany.
Haka fotoana kely hanaovana ilay installer haka ny rakitra ilaina ho an'ny fametrahana.
Rehefa mitranga izany, dia hahita ity varavarankely ity ianao.
Tokony hanamarina ny singa "Fampivoarana Classic Applications" - Ao amin'ny firafiny izy io dia tranokala dynamic mfc71.dll. Aorian'io, fidio ny lahatahiry mba hametrahana sy hampiasana "Install".
Manam-paharetana - Mety handany ora maromaro ny fametrahana ny fametrahana, satria raki-drakitra avy amin'ny serivera Microsoft ireo fitaovana. Rehefa vita ny fametrahana dia ho hitanao amin'ity varavarankely ity.
Tsindrio fotsiny amin'ny lakroa mba hanakatona azy.
Aorian'ny fametrahana Microsoft Visual Studio, ny solosaina DLL ilaintsika dia hiseho eo amin'ny rafitra, noho izany dia voavaha ny olana.
Fomba 3: Manosika ny tranokalan'ny mfc71.dll manerantany
Ny fomba fiasa voalaza etsy ambony dia tsy mety ho an'ny rehetra. Ohatra, ny aterineto miadana na fandraràna amin'ny fananganana antontan-taratasy fangatahan'ireo antoko fahatany dia hahatonga azy ireo ho tsy misy ilàna azy. Misy ny làlana iray - mila entanao ny tranombokin'ny tsy fahampian-tsainao ary manosehana azy amin'ny iray amin'ireo sari-kaonty.
Ho an'ny ankamaroan'ny dikan-teny Windows, ny adiresin'ity lahatahiry ity diaC: Windows System32Fa ho an'ny 64-bit OS dia efa hita izanyC: Windows SysWOW64. Ankoatra izany, dia misy endri-javatra manokana mila ampidirina, koa alohan'ny handehanana, vakio ny torolalana momba ny fametrahana ny DLL marina.
Mety misy ny zava-drehetra: ny fitehirizam-bokatra dia ao amin'ny ordinatera marina, ny fitomboana dia raisina an-tsoratra, fa ny fanamarihana dia mbola hita hatramin'izao. Midika izany fa misy DLL, nefa tsy mahafantatra izany ny rafitra. Azonao atao ny manamboatra ny famakiam-boky amin'ny alàlan'ny fanoratana azy ao amin'ny rejisitry ny rafitra, ary afaka manatanteraka io dingana io ny mpandidy iray.